Difaac ka tirsan kooxda Barcelona oo Albaabada u furay inuu ku biiro xagaagan Manchester United – Gool FM
(Barcelona) 15 Maarso 2019. Manchester United ayaa la soo warinayaa inay u kabo-gashan doonto sidii ay u raadsan lahayd oo ay gacanta ugu soo dhigi lahayd difaac qalbadda dhexe oo cusub inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Man United ayaa si weyn loola xiriirinayey difaac dhexe tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkan, waxaana la filayaa in kooxda Waqooyi-galbeed ay sameyn doonto isku daygeedii ugu dambeeyey oo ay ku soo qaadanayso difaac dhexe xilli ciyaareedka soo socda.
Difaaca kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti waa mid ka mid ah xiddigaha la la xiriirinayo garoonka Old Trafford warsidaha Calciomercato ayaana warinaya in xiddiga xulka qaranka France uu alaabada u furay inuu ka tago gageda Camp Nou.
Kooxda reer Catalan ayaana la soo saxiixan karta difaaca Ajax ee Matthijs de Ligt bilaha soo aaddan taas oo keeni karta in kooxda hoggaanka u haysa horyaalka La Liga ay iska dirto Umtiti.
25-sano jirkaan kaasoo lagu qiimeeyo adduun dhan 60 milyan oo gini ayaa sidoo kale olole niyadjab leh qaadanaya waxaana kaliya uu ciyaaray 10 kulan tartammada oo dhan sababo dhaawac awgiis ah.
"Alxamdulilaah Ilaah ayaa Maanta na bad-baadiyay.".- Ciyaartooy badan oo ka bad-baaday Xasuuqii New Zealand loogu geystay Muslimiin Masjid ku cibaadeysanaysa....(Sidee wax u dheceen!!?)
DEG DEG: Isku aadka siddeed dhammaadka Champions League oo la sameeyey… (Barcelona v Man United oo madaxa la isku geliyey)